चुनाव नगर्ने ? : ओली, गर्ने, गर्ने: देउवा - inaruwaonline.com
चुनाव नगर्ने ? : ओली, गर्ने, गर्ने: देउवा
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन ३०, २०७३ समय: १:४९:३२
काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनका लागि पार्टीले कुनै आग्रह पालेर नबस्ने बताएका छन् । ‘संविधान संशोधन औचित्य र आवश्यकताका आधारमा गर्न सकिने कुरा हो,’एमालेले शनिबार गरको चियापानमा ओलीले भने,‘हामी कुनै आग्रह लिएर बस्दैनौ ।’उनले आवश्यकता र औचित्य भने छलफलमा आउने उल्लेख गरे ।
चियापानमा सहभागी सत्तारुढ कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनका लागि एमालेको सहयोग लिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘एमालेले संविधान संशोधन आवश्यक छैन भनेको छैन,’ देउवाले भने,उहाहरुले औचित्य भनिरहनुभएको छ ,तर (संविधान संशोधनमा सहमति)मिल्छ।’
त्यस अवसरमा देउवा र ओलीलाई पत्रकारहरुले ‘चुनाव समयमै हुन्छ ?’ भनेर एकसाथ सोधेका थिए । सँगै रहेका देउवालाई ओलीले सोधे, ‘निर्वाचन त गर्नैपर्छ होइन, सरकारको धारणा के छ ?’देउवाले संक्षिप्त जवाफ दिए, ‘निर्वाचन हुन्छ,हुन्छ,हुन्छ । गर्ने,गर्ने,गर्ने । ’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।